विश्व फुटबलका दुई महारथी ब्राजिल र अर्जेन्टिना भिडदै, कस्ले मार्ला बाजी ? | | Neplays.com
विश्व फुटबलका दुई महारथी ब्राजिल र अर्जेन्टिना भिडदै, कस्ले मार्ला बाजी ?
विश्व फुटबलका दुई महान टोलि अर्जेन्टिना र ब्राजिल मैत्रिपूर्ण खेलमा आज आमने सामने हुँदैछन् । तीन महिनाको प्रतिबन्धपछि लियोनेल मेस्सी खेलमा फर्किँदैछन् ।
अर्जेन्टिना र ब्राजिलको खेललाई विश्व फुटबलमा सर्बाधिक प्रतिक्षा गरिएको खेलका रुपमा लिइन्छ । फुटबल खेलाडी उत्पादनमा अग्रणी दुई राष्ट्रबीचको खेल सर्वाधिक रुचाइएको खेलमध्ये एक हो ।
ब्राजिल र अर्जेन्टिनाबिच २०१९ को कोपा अमेरिकापछि पहिलोपटक प्रतिष्पर्धा हुन लागेको हो । कोपा अमेरिकामा ब्राजिलले अर्जेन्टिनालाई २–० ले पराजित गरेको थियो । ब्राजिलसँग हारेपछि अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेस्सीले आयोजकलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाएका थिए । त्यसपछि मेस्सीले तीन महिने प्रतिबन्ध झेल्नु समेत गरेको थियो ।
ब्राजिलसँगको खेलपछि प्रतिबन्धमा परेका मेस्सी तीन महिनापछि त्यही टिमविरुद्धको खेलबाट अन्तर्राष्ट्रिय म्याचमा उत्रिँदैछन् । खेल न्यूट्रल भेन्यू अर्थात साउदी अरवको राजधानीमा हुनेछ । कोपा अमेरिका जितेपश्चात ब्राजिलियन टिम निकै कमजोर देखिएको छ । पछिल्लो चार अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रिपूर्ण खेलमा ब्राजिलले एउटामा पनि जित निकाल्न सकेको छैन ।
नाइजेरिया, कोलम्बिया र सेनेगलसँग बराबरीमा चित्त बुझाएको ब्राजिल पेरुसँग भने पराजित हुन पुगेको थियो । अर्जेन्टिनाले भने कोपा अमेरिका पश्चात खेलेको चार खेलमा एउटा पनि पराजय भोगेको छैन । मेस्सीविना मैदानमा उत्रिएको अर्जेन्टिनाले जर्मनी र चीलिसँग बराबरीमा रोकियो भने इक्वेडर र मेक्सिकोविरुद्ध भारी अन्तरको जित निकाल्न सफल भयो ।
ब्राजिल र अर्जेन्टिनाबिचको प्रतिश्पर्धामा ब्राजिलले अहिलेसम्म ४६ खेल जितेको छ भने अर्जेन्टिनाले ३९ खेल जितेको रेकर्ड रहेको छ । पछिल्लो ५ भेटमा ब्राजिलले ३ खेल जितेको छ भने अर्जेन्टिनाले २ खेल जित्न सकेको छ ।